ဇာတ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုရ အနုပညာရှင်အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရလို့ ဂုဏ်ယူနေပြီး ပီတိတွေဖြာနေတဲ့ ထွန်းထွန်း – Suehninsi
ဇာတ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုရ အနုပညာရှင်အနေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရလို့ ဂုဏ်ယူနေပြီး ပီတိတွေဖြာနေတဲ့ ထွန်းထွန်း
အနုပညာလောကမှာနေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေးထွန်းထွန်းကတော့ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူ
တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ ဇာတ်ကားတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ပီပီ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပေါ့ပါးစွာနေထိုင်တတ်ပြီး
သဘောကောင်းတဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ ယခုမှာ ဆိုဖီယာရဲ့ ” ဘာကြောင့်လဲ ” ဆိုတဲ့ သီချင်းMTVလေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းကို အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပြောဆိုတတ်တဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ နှင်းဆီရင်ခွင်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ
ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတဲ့ ထွန်းထွန်းကတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ယခုမှာတော့ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ဇာတ်ဆောင်ထူးချွန်ဆုရအနုပညာရှင်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာရင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ ဂုဏ်ယူနေပြီး
ဝမ်းသာပီတိဖြာနေခဲ့ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းကတော့ ” Today Memo ပုံရိုက်သော အချိန်လေးတွေကိုသာ Mask ခန ဖြုတ်သည်. ” ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ထွန်းထွန်းရဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အနုပညာလောကမှာနရောတဈခုကို အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသားခြောလေးထှနျးထှနျးကတော့ ပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားတှမှော အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး အကယျဒမီဆုတှကေိုလညျး သိမျးပိုကျထားနိုငျသူ
တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကိုလညျး အခိုငျအမာရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ ထှနျးထှနျးကတော့ ဇာတျကားတှအေပွငျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့သူလေးပဲဖွဈပါတယျ။ လူငယျပီပီ လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ပေါ့ပါးစှာနထေိုငျတတျပွီး
သဘောကောငျးတဲ့ ထှနျးထှနျးကတော့ ယခုမှာ ဆိုဖီယာရဲ့ ” ဘာကွောငျ့လဲ ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးMTVလေးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျလကျြရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးကို အပွုံးလေးတှနေဲ့ ပွောဆိုတတျတဲ့ ထှနျးထှနျးကတော့ နှငျးဆီရငျခှငျအဖှဲ့သားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှော
ပါဝငျသရုပျဆောငျလကျြရှိနတေဲ့ ထှနျးထှနျးကတော့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ ယခုမှာတော့ ထှနျးထှနျးတဈယောကျ ဇာတျဆောငျထူးခြှနျဆုရအနုပညာရှငျတှကေိုမှတျတမျးတငျထားတဲ့စာရငျးမှာ ပါဝငျခှငျ့ရလို့ ဂုဏျယူနပွေီး
ဝမျးသာပီတိဖွာနခေဲ့ပါတယျ။ ထှနျးထှနျးကတော့ ” Today Memo ပုံရိုကျသော အခြိနျလေးတှကေိုသာ Mask ခန ဖွုတျသညျ. ” ဆိုပွီး ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ထှနျးထှနျးရဲ့ ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။